Guzubheri Ural nekabhunakeri - chipo kubva vachengeti Breeders Research Institute of Horticulture kubva Yuzhno-Uralsk. Iye vagara yakakurumbira pamwe nevagari zhizha, uye kubvira 2000, rwuripowo State Register zvirimwa muchero kuti kurimwa mu West-Siberian nharaunda.
A zana apfuura, ndaifarira nokuda Chikwata zhinji guzubheri aisangozivikanwa chete zvayo zvinobatsira ehupfumi, asiwo yeminzwa mumakwenzi, izvo zvakaoma kucheka, uye kukohwa hakusi nyore kuunganidza.
Nhasi, Breeders vakauya nemarudzi kwete chete pasina minzwa uye kuchitonhora nemishonga, asiwo pastries kubva chiedza rwegirini dema. Imwe nzira nokudyara munyika iri guzubheri Ural neemaradhi, vane tsanangudzo dzakasiyana-siyana anoita uchida kuzvitsaurira kwaari nzvimbo rukuru sezvinobvira.
It nemiti yose svikiro yakakwirira, zvakarurama chiine korona batana.
Kusiyana nevamwe ruminant marudzi, gooseberries Ural nekabhunakeri haana kurasa kwayo "chipingamupinyi", nokuramba ake makobvu greenish muchadya yakatesvera panyanga dzacho duku pamwe kwavo yose kureba.
Mashizha siyana ichi hadzisi zvakaenzana uye yakasiyana padzinde rimwe, unogona kuwana zviduku kupenyerera makopi yerima zvakasvibirira ruvara. Chinhu bedzi kunovabatanidza - ndiwo mufananidzo wakavezwa uye mupendero unopinza kwemeno.
Guzubheri Anotumbuka Ural neemaradhi guru kuzvidzora pollinating pingi inflorescences.
Nokuti shrub ichi kunoratidzwa kusavapo spines chokumusoro nodes uye interstices, saka zvinonzi semhosva unosvikirwa spiny.
Ndicho guzubheri rudo pazororo giredhi Ural Emerald (wongororo ngaadarowo), saka nokuda michero yake. Large, kunhivi kana zvishoma elongated denderedzwa, chiedza mutema, pamwe mutete ganda, vane mukana wakanakisisa rinotapira kana anovava-inotapira kuravira.
Mafungiro evamwe akasiyana uye zvinofadza. Unganidza anopfuura 6 makirogiramu yemachikichori kumuromo kubva mugwenzi - ichi ndechimwe chikonzero kudyara guzubheri Ural neemaradhi panguva dacha ake.
Unoitawo basa rinokosha sekanguva kutsungirira pachinhu kuSiberia okunze, uye kuti vakawanda tupukanana uye zvirwere yaingowanikwa gwenzi ichi.
Heino imwe guzubheri ari Ural neemaradhi tsanangudzo dzakasiyana-siyana kuti chinokonzera chido kuravidza kwayo michero makuru muto. Uye kunyange ake chipingamupinyi hazvina kumutadzisa mafeni marmalades, mumigwagwa yakawandisa motokari uye compotes kubva zvibereko shrub ichi.
Betsero dze Ural neemaradhi
The chikuru zvakanakira mukirasi iyi ndiwo:
Palatability michero izvo yakakodzera kushandiswa zvose nyoro nechimiro uye akachengetedzwa. Zvikurukuru zvinonaka uye utano vanoita mumigwagwa yakawandisa motokari uye zvinochengetedza asi hapana zvishoma yakakurumbira pamusoro neiya inoiswa muzvinwiwa zvinodhaka izvi somushonga. Zvibereko Ural neemaradhi zvakakwana kushivirira kuoma nechando, apo dzichichengetedza zvose ehupfumi zvavo.
Kwete chete kuti, mukuru-ichibereka siyana, michero yayo asingadi zvinoodza chiwondomoke, asi akabvisa mapazi vane nyore chaizvo.
kurwisa Zvakanaka kuSiberia chando waanodzikisira hanya navo.
nemishonga zvirwere uye kuvasunungura truckers kubva zvisingakoshi mari kuti mishonga uye spraying nguva.
Zvikomborero zvakadaro Ural neemaradhi kubva "vabereki" vavo, nekuti yakura nokuda kuyambuka akakurumbira akasiyana Nugget pamwe Dangwe Minusinsk.
How yokusima guzubheri
Mumwe mukana siyana kwayo compactness, zviri kunyanya anokwezva kuti varidzi muminda miduku, nokuti zvakakwana duku munda unogona yokusima nemiti shoma kuti mune ramangwana kuti vaunganidze kubva neimwe 6 makirogiramu chirimwa.
Practice inoratidza kuti pamakwenzi wakasimwa pedyo Ural neemaradhi zvinopa yepamusoro goho, sezvo vasiri chete nokugutsikana pollinating zvakakodzera paumbwe korona, asi pollinate mumwe, iyo inotungamira dzokuwedzera makirogiramu pakati michero.
Nzvimbo yakanakisisa kumhara mukirasi - vadanana rezuva divi mugove.
Inokosha: Ural neemaradhi contraindicated mumupata kubva ikoko otora mwando, zvichiguma podgnivaniyu midzi yawo. Hillocks zviri zvakare haana rakakodzera, sezvo pane imwe kunyanyisa - the mwando nokukurumidza haazombotaurwi kubva muvhu.
The yakanakisisa mwedzi kuti pakudyara - ndiwo mugumo September, asi iwe unofanira kutarisa nharaunda. Chinhu chikuru kuti kumhara akatora nzvimbo 3 kwemavhiki asati wokutanga chando. Asi zvakanaka maberekero nguva - yechirimo. Nyore nzira - iri dzichingochururuka kuchekwa kubva mai memukoko pamwe unozotevera kupatsanurwa chitarisiko simba midzi.
Chakasimwa mizambiringa yakabva kumwe achibudiswa nourume vakagadzirira uye Organic fetiraiza matsime anoteverwa kudiridza.
Care of Ural neemaradhi
Kana uchitenda zvavanotaura pamusoro guzubheri Ural Emerald akaongororazve Chikwata, ipapo hanya pavo usingashandi. Sezvo vachiti, ndikasimamo uye kukanganwa. Kutaura zvazviri, rinoda mvura sezvo kuomesa ivhu, akasundira ivhu, Kusakura, uye kuchekerera makwenzi mumatsutso mari nokuda zvakakodzera paumbwe korona.
Organic fetiraiza rinoshandisirwa ivhu iri kuwa apo zvicherwa haisi pamakwenzi muchirimo yakakwana. Ndiyo kutarisirwa yose Ural neemaradhi.
Zvipukanana uye zvirwere
Kunyange zvazvo siyana iri husingakwanisi powdery nokuvhuvha, uye anthracnose, nebato ravo shavishavi sechifusi achibhururuka kumativi, kuongorora mamiriro eutano pamakwenzi chinodikanwa.
The anokonzera matambudziko vangava inda dzemuriwo kana makonye, izvo kunyange zvayo kunonoka ndiko saka voracious kuti vanogona munguva pfupi kuparadza kwete chete zvibereko asiwo gwenzi yose. Saka, mvura yose vanofanira ukanyatsoongorora mashizha zvikwenzi nyaya spoilage yavo.
Panguva kuonekwa kuti "nechisimba" kutanga kushandisa fungicides uye mwaya vose utachiona uye noutano pamakwenzi.
Useful ehupfumi of Ural neemaradhi
uhwiro kwete chete unhu anokwezva vashanyi chirimo kuti guzubheri, asi ayo ehupfumi zvinobatsira. Sezvaunoziva, ichi gwenzi michero akapfuma vhitamini ari C, ane kwaibatsira pamusoro zvirwere, uye kweserotonin, iyo "havadi" masero kenza.
In michero Ural neemaradhi pane ichi "kukwana" ari mukuru azvipire vhitamini P uye pectins izvo anokwanisa kuona munyu inorema simbi kubva chiropa, itsvo uye dzimwe nhengo.
In chevarwere mushonga, michero izvi inoshandiswa senzvimbo diuretic uye choleretic mumiririri, uyewo immunomodulator. Saka Zvinokurudzirwa kushandisa zvibereko Ural neemaradhi kunyanya mbishi, asi chando kuri kubatsira, vanobatsira kuramba muviri mumatsutso-yechando nguva.
Barberry - kurimwa uye kutarisirwa
Digital Weather Stations kunobatsira kuronga Garden Works
Cumberland - Raspberry pastries dema. Zvakanakira nekuipira mhando. kukura mahabhurosi
Nei asina zvibereko Cherry? Sei Cherry maruva, asi hazvina kubereka zvibereko
Inobatsira indoor miti nokuti musha: itsva Kutarira shamwari ekare
Mbeu Proraschivatel - kukohwa gore rose
Chii mhemberero? mienzaniso mhemberero
Chii basa wekambani?
Video zvokurekodhwa motokari kutyorwa sezvo uchapupu. Sei kukumbira pamusoro kamera hwakanaka Video Kuda kutamba
Dzakarukwa poncho akataura: akanaka, kudziya, dzemhando yepamusoro
Reusable gel ziso chifukidzo: wongororo
Vanobudirira muviri kuti tsandanyama chiso
Kugarisana nemiriwo pandima Tips Chikwata
Sei kudimburira wako katsi kuti nenzara kumba
Screws ane venhau pesin: unhu uye mhando
Sebastian Fukang - co-muvambi Parkour uye Freerunning muvambi
Coffee Sefa - kofi filters, naanamai!
Mazano mashomanana ekuraira bhakoni